Amabala asimahla e-watercolor yoyilo lwakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Arnau Aparisi | | Izibonelelo, Ukuhlelwa
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuzisele isifundo ngendlela yokwenza Iifonti zempembelelo zamanzi, namhlanje sikulethela ukhetho lwamabala e-watercolor mahala onokuyisebenzisa kwesi sifundo. Imifanekiso esikulethela yona kule meko ayihlawulelwanga kwaye ikumgangatho ophezulu eya kukuvumela ukuba ungayisebenzisi kuphela kwisifundo esikubonise sona kwiintsuku ezingaphambili kodwa nakwizinto zakho zoyilo.
Amabala emibala yamanzi:
La ukhetho lokuqala yoku amabala amathandathu e-watercolor Iya kukuvumela ukuba ungeze ezinye iindawo ezichaphazelayo kuyilo lwakho. Le mifanekiso ingena .PNG ngaphandle kwemvelaphi esivumela ukuba sibongeze kuyilo lwethu ngendlela engaphezulu. Kule meko abanalo ubume bephepha, oku kuyasivumela ukuba sibongeze nakweyiphi na indawo, ukusuka kwimizobo apho sifuna ukunika imibala embalwa kumbala, kwiipackagings apho sifuna ukunika ubushushu obufudumeleyo kunye nobangoku. Ukhetho luneempawu ezintathu ezifudumeleyo ezinemibala ye-watercolor (iorenji, bomvu, magenta, tyheli, ocher, nomdaka) kunye neendawo ezintathu ezinemibala epholileyo (luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza, mfusa, nemfusa).
La ukhetho lwesibini yenziwe ngamanye amabala amathandathu e-watercolor Sikwafumana simahla kwifomathi enkulu, oku kusivumela ukuba sandise okanye sikhethe kuphela indawo yeli bala. Nokuba kukusebenzisa ubume kuyilo lwethu okanye ukuyisebenzisa kwifomathi enkulu. Olu khetho lukwifomathi .PNG Akukho mvelaphi isigcinela ixesha lokucoca ibala, kule meko abanalo iphepha elinombhalo.
Ngokungafaniyo nokukhethwa kokuqala kwezi ndawo zine ulwandlalo olungaqhelekanga, ke zilungele ukufaka isicelo njengobumba. Ukhetho lwenziwe ngamabala amathandathu, kule meko ukhetho lwemibala lubanzi kwaye ludlamkile.
Kuzo zombini iimeko ingcebiso yam yeyokuba uguqule imibala kunye nendlela yokuyisebenzisa, ukuze ubone ukungahambelani kwezi kunye nenani lezinto abanokusinika zona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Amabala asimahla emijelo yamanzi